Month One ၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၁-၈ ၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၉-၁၃ ၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၁၄-၂၀ ၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၂၁-၃၄ ၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၃၅-၃၉ ၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁း၄၀-၄၅ ၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၁-၁၂ ၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၁၃-၂၂ ၉။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၂း၃၃ / ၃း၆ ၁၀။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၇-၁၉ ၁၁။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၂၀-၃၀ ၁၂။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၃း၃၁-၃၅ ၁၃။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၁-၂၀ ၁၄။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၂၁-၃၄ ၁၅။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄း၃၅-၄၁ ၁၆။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၁-၂၀ ၁၇။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၂၁-၂၄ / ၃၅-၄၃ ၁၈။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၂၅-၃၄ …
သင်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေကြုံနေရရင် သင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း ယိမ်းယိုင်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေအဖြေမရတော့ဘူးလို့ခံစားလာရတဲ့အခါ သင်မောပန်းနေတဲ့အခါ ညဖက်အိပ်မရတဲ့အခါ ကို့ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ခံစားလာရတဲ့အခါ အရာရာမှားယွင်းနေတဲ့အခါ သစ္စာဖောက်ခံတဲ့အခါ သင်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အခါ သင်သတ္တိတွေလိုအပ်နေတဲ့အခါ အခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခံရပြီး & ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ When You Are Sick When You Feel Like Giving Up When You Are Tempted …
ကယ်တင်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့ ကင်းကွာသွားစေပါတယ်၊ကျွန်ုပ်တို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ဘုရားသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်မှာနေလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပါ။သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တွေအတွက်ကိုယ်စားအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံယူဖို့ကားတိုင်မှာအသေခံခဲ့ပေးပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်မယ်ဆိုကျွန်ုပ်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးထားဝရအသက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (-တမန်တော်ဝတ္ထု ၄:၁၂,ဧဖက် ၂: ၈). ယုံကြည်ခြင်း ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ စိတ်ချမှုရှိခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့လက်တွေ့မှာ တစ်စုံတရာ မမြင်ရသေးပေမယ့် ယုံကြည်နေခြင်း (ဟေဗြဲ ၁၁: ၁). ကျေးဇူးတော် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပေမယ့်, သူဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ပေးတယ်, ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် , အနာရောဂါတွေငြိမ်းစေပါတယ် (ရောမ ၅: ၈). အပြစ် အခြားသူတွေ , မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ ဘုရားသခင်အပေါ် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ နှုတ်ထွက်စကားတွေနဲ့အပြုအမှုတွေ (ရောမ ၃:၂၃၊ ၆:၂၃). နောင်တ ကိုယ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသွားနေရာကနေ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းအတိုင်း ပြန်လည်လျှောက်လှမ်းခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ခြင်း (၂ ကော ၇ : ၉-၁၀). …
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပြီးဆင်ခြင် ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသာ၍ကြီးထွားသန်မာစေပြီး ဘုရားသခင်နဲ့သာ၍နီးစေပါတယ်။အောက်မှာနမူနာပြထားတဲ့ဂျာနယ်ရေးနည်းကမိတ်ဆွေကို ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ရလာဖို့နဲ့ , နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဘုရားစကားကိုဘယ်လိုလက်တွေအသုံးချရမလဲဆိုတာ သိရှိလာအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း အစီအစဉ်(ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာပြထားတဲ့ဇယား)ဟာ ကျမ်းစာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ကူညီပါလိမ့်မယ်။သင့်အသက်တာထဲ မှာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး , ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ စကားသံကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေဖို့အဆင်သင့်ပြင်ရအောင်။ Journalရေးဖို့နမူနာ ၁။ ရက်စွဲတပ်ပါ ၂။ ရက်စွဲရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်တပ်ပါမယ်, ဒါပေမယ့်ခေါင်းစဉ်နေရာကို ခဏကွက်လပ်ချန်ထားပါ( နောက်မှပြန်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်)။ ၂။ ဒီနေ့ ဖတ်မယ့်ကျမ်းချက်ကိုချရေးပါ။ ၄။ ဒီနေ့ဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ထဲကနေ ခွန်အားရတဲ့အချက်ကိုရေးပါမယ်, အဓိကအချက်လေးတွေပဲရေးပါ။ ၅။ ခွန်အားယူထားတဲ့အချက်ကနေ ဆုတောင်းချက်တစ်ချက်ပြန်ချရေးပါ။ ၆။ အပေါ်ဆုံးကချန်ထားခဲ့တဲ့ “ခေါင်းစဉ်”နေရာမှာ ခေါင်းစဉ်ပြန်တပ်ပေးပါမယ်။ သတင်းတပတ်အချို့လောက်ပုံမှန်ရေးလာမယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်ဟာသင့်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာသင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဂျာနယ်ရေးဖို့နမူနာပုံစံ ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက် ခေါင်းစဉ် – ကျွန်ုပ်နှလုံးသားသည် ဘုရားစကားမျိုးစေ့ကျဖို့ရန်ကောင်းသောမြေ မဿဲ ၁၃:၁-၂၄ – လယ်စိုက်သူ, ဘုရားသခင် ,အမြဲမျိုးစေ့ချတယ်, သူ့ ရဲ့ စကား …
ပထမဆုံးလအတွက် Journaling »